> Resource > iPod > Sida loo Beddelaan iyo Play Music on iPod
Songs encoded by M4A, MP3, AIF, regelingen, M4B iyo M4R lagu ciyaari karo aad iPod. Laakiin qaar kale oo ay ku jiraan OGG, AAC iyo WMA la socon karin iPod. Haddii aad ku helay badan oo heeso la qaabab aan habboonayn, sida aad ciyaari kara iyaga ku saabsan iPod?
Xaaladdan oo kale, waxaad si fiican isku dayi lahaa inaan software xisbiga thrid ah, sida TunesGo Wondershare (dadka isticmaala Windows) ama Wondershare TunesGo (Mac) . Software Tani waxay kaa caawinaysaa in aad loogu badalo oo lagu wareejiyo wax qaabab music leheyn in kuwa saaxiibtinimo iPod. Markaas, waxaad ka ciyaari kartaa music on iPod si xor ah. Intaa waxaa dheer, waxa ay awood aad u ciyaaro music iPod kombiyuuterada kala duwan.
Download software iyo isku day hage hoose.
Fiiro gaar ah: TunesGo Wondershare ayaa si buuxda u la jaan qaada iPod shaandheeyn, nano iPod, classic iPod iyo iPod taabto. Hel faahfaahin dheeraad ah ee ku dayashada iPod. Si kastaba ha ahaatee, TunesGo Wondershare ah (Mac) si fiican u shaqaynayaan la iPod xiriiri 5/4 in ay maamulaan macruufka 8, macruufka 7, macruufka 6, macruufka 5 iyo sidoo kale arrimo la sii daayay cusub 9.
Hab fudud si loogu badalo oo muusig ka iPod
Bilowga aad, rakibi oo ay maamulaan software this on your computer Windows ama Mac. Halkan, ha u fuliyaan tutorial la version Windows ah.
Tallaabada 1. Isku iPod in ay kombiyuutarka
Software Tani waxay si habboon dhex shaqeeyaa tethering USB. Sidaas darteed, waxay isticmaalaan cable USB ah si aad u hesho iPod iyo computer ku xiran. Software Tani waxay si deg deg ah lagu ogaan doonaa iPod ah. Markaas, waxaa muujin doonaa xogta iPod ku jiraan music, videos iyo sawiro galeeysid ka tagay.
Tallaabada 2. iPod play music
Tag "Media" galeeysid ka tagay. By default, furmo suuqa music waxay muujinaysaa ilaa Murayaad saxda ah. Haddii aan, guji "Music" on line ugu sareeya. Guji "Add" ka dibna dhirtuba your computer uu furmo suuqa pop-up file caleenta ah. Raadi files music doonayo iyo guji "Open" si ay u wareejiso. Haddii aad hesho fariin kuu sheegaysa in files music, kuwaas oo aan lagu ciyaari karo iPod, guji "Haa". Markaas, software iyaga badalo doonaa heeso ka encoded by MP3.
Maxaa dhacaya haddii aad doonaysid in aad ka ciyaari files music ka Lugood, laakiin ma doonayo in aan ka saar oo dhan songs hadda ku iPod by syncing? Way fududahay. Guji "playlist" si ay u muujiyaan suuqa kala playlist ah. Riix saddexagalka yar "Add" iyo "Add Lugood Playlists" hoos. Daaqadda soo socda, sax kaliya playlists aad doonayso. Markaas, guji "OK".
Hadda, aad jeesan oo lagu wareejiyay music aad iPod. Tubada "Music" on iPod iyo muusig.
Marka laga reebo ka iPod ciyaaro music, aad awoodo inuu ciyaaro music iPod kombiyuuterada kala duwan. Markaas, rakibi TunesGo kombiyuutarka kaas oo aad u jeclaan lahaa inuu ka ciyaaro music iPod. Markaas, furmo suuqa music, heeso dooran in aad go'aansato in aad u ciyaaro kombiyuutarka. Oo guji saddexagalka rogay hoos "Dhoofinta in". Markaas, 2 doortaan muuqataa: "Dhoofinta in My Computer" iyo "Dhoofinta in Lugood Library". Guji mid ka mid ah si loo badbaadiyo heesaha oo ku Lugood ama folder ah kombiyuutarka.
Fiiro gaar ah: playlists beddelashada ka Lugood in iPod waxaa laga heli karaa oo keliya marka aad isticmaasho version Windows.